Dhageeyso,,wafdi uu horkacayo wasiirka arimaha gudaha kg oo maanta gaarey degmada Diinsoor. – Radio Baidoa
Dhageeyso,,wafdi uu horkacayo wasiirka arimaha gudaha kg oo maanta gaarey degmada Diinsoor.
By Webmaster	 Last updated Apr 5, 2020
Degmada Diinsoor ee Gobolka Baay waxaa gaarey Wafdi isugu jira Xildhibaano iyo Wasiiro ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed,kuwaas oo halkaasi u tegay sidii xal looga gaari lahaa dagaal beeleed ka dhacay halkaas.
Xubnaha wafdiga iyo qaar kamid ah Odayaasha Dhaqanka degmada Diinsoor ayaa waxaa ay yeesheen kulan looga hadlayay sidii loo dhex dhexaadin lahaa laba beelood oo ku dagaalamey degmada Diinsoor.
Qaar kamid ah Odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed oo wafdiga kamid ahaa ayaa waxaa ay shacabka uga tacsiyadeeyeen dadkii ku dhintey dagaalkii dhacay,waxaana ay sheegeen inay wadaan sidii naabad dadka degmada Diinsoor ugu wada joogi lahaayeen.
Gudoomiyaha gobolka bay cali wardheere dooyow oo isna kamid ahaa wafdiga maanta gaarey degmada diinsoor ayaa sheegey in cadaalada lamarsiindoono shaqsiyaadkii danbiyada geeystey.
ugu danbeen Wasiirka arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Abuukar ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay donayaan in dadka ay nabad ku wada noolaadaan,waxaana uu sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin in markale uu dagaal dhaco.
Dad u badan Shacab ayaa ku dhintey dagaal beeleed ka dhacay degmada Diinsoor ee Gobolka Hiiraan iyo dilal la xiriirey aanooyin qabiil walow xaaladu ay haatan degan tahay.
Dhageeyso,,Wasiirka warfaafinta kg oo cambaareeyey kufisi kadhacey meelo kamid ah Dalka .
Shirkadda Turkish Airline oo Joojisay Duulimaadyadeed ilaa iyo 20ka april.